सोलुखुम्बु : गोराखानी र खोरियाका साढे ४ सय घरका लागि खाद्यन्न र स्वास्थ्य सामग्री - Nepal News Site
पिटी लोप्चन २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार २१:४५
सोलुखुम्बु : सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नं. ९ गोराखानी र वडा नं. ६ खोरियाका करिब साढे चार सय घरपरिवारलाई राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको छ । नगर उपप्रमुख कल्पना राईको रोहबरमा हिमालयन चिल्ड्रेनस् अफ खोरिया फ्रान्सले गोराखानीका ३ सय ४३ र खोरियाका १०५ गरी ४ सय ४८ घरपरिवारलाई राहत वितरण गरिएको हो ।
संस्थाका नेपाल संयोजक गेलु शेर्पाका अनुसार प्रति घर परिवार ३० किलो चामल, एक लिटर सोयबिन तेल, एक किलो नुन र २० प्रति मास्क वितरण गरिएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित बासिन्दालाई राहत होस् भनी खाद्यन्न वितरण गरिएको संस्थाका नेपाल संयोजक शेर्पाले बताउनुभयो । संस्थाले विगत १५ बर्षदेखि सोलुखुम्बुको विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय १००० थान
जिल्ला प्रहरी कार्यालय १००० थान